Dominica akagbuo Ememme Music nke World Creole 2020
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Dominica » Dominica akagbuo Ememme Music nke World Creole 2020
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ gbasara Dominica • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ministri nke njem nleta, njem ụgbọ njem na njem ụgbọ mmiri, site na Discover Dominica Authority (DDA) na-enyocha ọnọdụ ahụ gburugburu ụwa gbasara mgbasa nke Covid-19.
Emeela mkpebi iji kagbuo mmemme mbinye aka kacha elu nke Dominica, ememme World Creole Music. Ihe omume ahụ, nke a tụrụ maka October 23, 24 na 25, 2020, ga-abụ 22nd mbipụta. Na 2019, ememme World Creole Music Festival dekọrọ ihe karịrị ndị bịara 20,000 ma jee ozi dị ka ihe na-akpali akụ na ụba na-akpali akpali maka agwaetiti ahụ.
Onye Minista maka njem nleta, njem ụgbọ njem mba na njem ụgbọ mmiri, bụ Honorable Denise Charles, mgbe a gbara ajụjụ ọnụ na August 28, 2020 kwupụtara kagbuo mmemme ahụ na-ekwupụta “Anyị gaara enwe mmasị ịnwe World Music Creole Music, mana dịka ị maara ndị a bụ oge ịma aka na ahụike na nchekwa nke ụmụ amaala anyị bụ ihe dị mkpa na, n'ihi ya, gọọmentị ewerela mkpebi dị mkpa iji kagbuo World Music Creole Music for 2020. " Miss Charles chetakwara ndị na-elekọta ya mkpa ọ dị maka usoro nkwekọrịta e guzobere maka COVID-19, "Anyị ga-agbaso usoro ogbugba ndu, dịka gọọmentị, anyị enweghị ike ịkwalite mmemme ịchịkọta ọtụtụ mmadụ ruo mgbe a na-achịkwa ihe," ka Mịnịsta ukwu ahụ kwuru.
Mkpebi ịkagbu Ememme Music World Creole zuru oke. Ndị Kọmitii Ememme Dominica na-esoro ndị otu Kọmitii Ememme Dominica na-emekọ ihe ọnụ na ihe dị ka mmadụ iri anọ dị iche iche, ndị niile so rụọ ọrụ dị oke mkpa na mmejuputa na mmemme nke ememme ahụ kemgbe ọtụtụ afọ. N'iburu oria ojoo a n'uwa, emere nyocha banyere onodu ahia ndi ozo di ugbu a gunyere Guadeloupe, Martinique, St. Lucia, Antigua, St. Maarten na ndọtị Europe (France, England) na North America. Nyocha a gụnyere ọnụ ọgụgụ nke COVID-19 na-arụsi ọrụ ike, mmachi mbata na ikike mmadụ niile ịga. E kwubiri na enweghi mgbagwoju anya dika o gbasara oge ugbo elu na ikike, na usoro iwu ohuru maka njem na nzuko ndi mmadu nwere ike igbochi ahuhu nke ndi ahia. E lebara anya nke ọma n'eziokwu na ndị njem nwere ike ha agaghị enwe ike iwepụ ego ha ga-ewepụtacha nakwa na n'ozuzu ha, ndị ọchụnta ego na-etinyekarị ego n'ihe omume a nwere ike ha agaghị enwe ego ha ga-eji kwado ya n'ihi nsogbu nke ha metụtara ọrịa a.
Ememe Music World Creole na-arịwanye elu ebumnuche kwa afọ dị ka ihe omume mbinye aka na Dominica site na ịmepụta mmata maka ebe a na-aga, yana ihe omume ndị ọzọ a na-eme kwa afọ, na-enye aka na ihe dịka 10% nke ndị na-abata kwa afọ na Dominica. Ihe omume a na-edekọ ihe omume iri na ise gafere abalị atọ ahụ na n'ọtụtụ ọnọdụ gosipụtara ụdị egwu dị iche iche iri. N’ihi ya, mkpebi a adịghị mfe ma ọ bụ kwụ ọtọ. E gosipụtara ndị nwere oke ruru nhọrọ anọ gbasara mmụba nke WCMF 2020, wee jiri nlezianya tụọ uru na ọghọm nke nhọrọ ọ bụla. Enwere ike iji ihe omume ahụ mezuo ebumnuche ya niile, ọkachasị ebe ọrụ akụ na ụba dị, tụlere atụ, yabụ na-ebute mkpebi ịkagbu.
Anyị chọrọ iji ohere ahụ kelee ndị niile na-elekọta Dominica's World Creole Music Festival na mpaghara, mpaghara, na mba ụwa maka nkwado na nghọta ha gara n'ihu. Lelee maka mbipụta ọzọ nke Dominica's World Creole Music Festival, nke a haziri na October 29, 30 na 31, 2021.